नेरुडेको २०.७९% लाभांश सुरक्षित गर्ने आज अन्तिम मौका, पुस २० मा एजीएम
काठमाडौं ः नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २०.७९% लाभांश सुरक्षित गर्ने आज (मंसिर ४ गते) अन्तिम मौका हो । पुस २० गते हुने वार्षिक साधारण सभाको लागि कम्पनीले बिहीबारदेखि सभा हुने दिनसम्म बुक क्लोज गर्दैछ । यसआधारमा बुधबारसम्म कायम सेयरधनीले मात्र कम्पनीले वितरण गर्ने लाभांश सुरक्षित गर्न सक्नेछन् ।
कम्पनीले गत वर्षको कमाईबाट १५% बोनस सेयर र ५.७९% नगद लाभांश वितरण गर्न लागेको हो । यस कम्पनीको बोनस वितरणमा ५ करोड १८ लाख ६७ हजार रुपैयाँ र नगदमा २ करोड १८ हजार ८४२ रुपैयाँ खर्च हुनेछ । सभा उद्योग संगठन मोरङको सभाहल विराटनगरमा बिहान ११ बजे सुरु हुनेछ ।
कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव पनि छ । आर्थिक वर्ष २०७४–७५ को नाफा नोक्सान सम्बन्धी हिसाबका सम्बन्धमा पनि सभामा छलफल हुनेछ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५–७६ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति र पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने अर्को एजेन्डा पनि रहनेछ ।
नेको इन्सुरेन्सको १२% बोनसमा मूल्य समायोजन, कतिमा खुल्यो कारोबार ?
एनआइसी एसियाको ऋणपत्र भर्ने आज अन्तिम मौका
वाणिज्य बैंकहरुको नाफा २५% ले बढ्दा सबैभन्दा आकर्षक कुन ?
तीन निर्जीवन बिमा कम्पनीको गत वर्ष यस्तो रह्यो कमाई
नेपाली पैसाले सुरु गर्दैछ अब एक हप्ते सेयर बजार तालिम, तपाईं पनि आउनुस् है !